အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီချမ်းရဲ့ တနေ့တာ (အောင်မျိုး(ဘလောခ်စပေါ့ )-ဗျူးသည်)
Posted by တီချမ်း at 1:21 AM
သဇင်ဏီ April 27, 2009 at 9:55 AM
မိုးခါး April 27, 2009 at 10:16 AM
မုန်းတယ် မုန်းတယ် ရမ်းရမ်းမုန်းတယ် :P
(တီပြန်အော်မှာ သိပါတယ် .. နင်မုန်းတာထက်ပိုမုန်းတယ် .. :)
ရေချိုးရင် သတိထားနော် ..
ကန်ထဲမှာ ........ :P
Anonymous April 27, 2009 at 10:16 AM
အဲဒီလောက် အစားငမ်းနေမှဖြင့် မပြောလိုက်ချင်ဘူး။ အဲဒီနေ့က ချောင်းဆိုးနေလို့ ဆေးဝယ်ပြီကြောင်း မိရောင်ဆီ ဖုန်းဆက်တာဘာလို့ ချန်ခဲ့တာလဲ။ သွား ခေါ်ဘူး။ မိရောင်အတွက် အဲဒီခေါက်ဆွဲဝယ်လာမယ်ဆိုပြီး ရွှီးသွားတယ်။ ရေချိုးတာတောင် အနောက်က တစ်ယောက် အဖက်ခံချင်သေး။ ငါ့ အဒေါ်ကတော့လေ မနိုင်ဘူးဟေး။
ကဲကဲ အားလုံးပဲ တွေ့တယ်နော် ချစ်တီရေချိုးရင် နောက်ကနေ တင်းတင်းလေးဖက်ထားပေးကြ။ ဟိဟိ
မိုးခါး April 27, 2009 at 10:17 AM
ချမ်းရေ ချမ်းရေနဲ့ ခေါ်သံကြားရင်လည်း ပြန်မထူးနဲ့နော် .. လုံတဲ့ နေရာရှာပုန်း သိလား .. :P
may April 27, 2009 at 10:29 AM
မဆုမွန် April 27, 2009 at 10:59 AM
တီနော် နာ့အနား ရောက်တာတောင် နာ့ကို မခေါ်ဘူး ကျပ်သူကျပ်မှာ ရှင်က ပတ်ချင်သူနဲ့ပဲ ပတ်တာပေါ့လေ..
ဘူဖေးလ်ကတော့ ကျူပ်အကြိုက်ဆုံး အခု ကျူပ်ရောဂါကို နံမည်တပ်ပေးကြတဲ့အထဲမှာ အလာဂျစ်ဖြစ်ပုံရတယ်ဆိုလို့ ပင်လယ်စာတွေ မစားရတော့ဘူးတဲ့ဟယ် ဗြဲ...
ဘိုင်သဝေး ရှင့်အင်တာဗျူးကလဲလန်းလှချည်လား လန်ထွက်နေတာပဲ...မိုက်တယ် အဲ့တာမျိုးလေး များများရေးပေး
ဖိုးစိန် April 27, 2009 at 3:33 PM
ဗျူးတဲ့သူရော အဗျူးခံတဲ့သူရော ပေါတောတောရယ် ..း)
““““နောက်ကနေ မောင် ကိုကြီး ညီ ကလေးလေး ကောင်လေး စိန် တယောက်ယောက် က ဖက်ထားပေးပေါ့ ..................အဟိ..................““““
မဟုတ်လို့ကတော့ရေချိုးခန်းမှာပဲ တနေတာပြတ်လို့ ညစာငတ်သွားမယ်..
ထားပါတော့ ဒါက ချမ်းရဲ့စာရေးတဲ့စတိုင်ဆိုတော့
လွန်တာရှိ ဝန်တာမိပဲ အခုတည်းက
တနေ့တာက ချက် စားတာနဲ့ တင်အချိန်ကုန်တယ်ဆိုတော့
အန်တီချမ်း April 27, 2009 at 4:19 PM
ဒီပိုစ့်လေးရဲ့ ဘလောခ် အောင်မြင်ရေးနည်းလမ်းတွေက ရေးရင်းနဲ့ သရော်စာလိုလိုဖြစ်သွားတယ်
တချို့တွေ က သူတို့ ကိုရေးတယ်ထင်ရင် လဲ တည့်တည့်ရေးပါတယ်ပဲပေါ့
မဖြေရှင်းပါဘူး စရေးကတည်းက ရေးနေရင်းနဲ့ တချို့ တချို့ ကတော့ ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ်
အမှန်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရေးထားတာပါ တကယ်လဲ အဲလိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်
ရယ်ရတာ တခုက အပေါ်က ဦးမွန်က အရမ်းကြိုက်ပြီးတော့
အောက်က ဖိုးစိန်က မကြိုက်ပါဘူးတဲ့
Rita April 27, 2009 at 6:12 PM
ငါ့ကိုများ အရီးတောင်းနဲ့ အမျိုးစပ်ပေးနေသေးတယ်။
ဆိုးဆေးကိစ္စနဲ့ black list ၀င်သွားလို့ကတော့ အကုန် ဆွဲခေါ်မှာနော်။
ညလေး April 27, 2009 at 7:02 PM
တီချမ်းရဲ့ တစ်နေ့တာက ဂွတ်ဒ်လှချည်လားနော်
အမဲ မစားလို့ ၀က်သားလုံးကို တီချမ်းဆီက ကြာဇံနဲ့ လဲစားသွားတယ်နော်၊ ညှပ်မကြိုက်ပါ။ အဲတော့ တီချမ်းက ညှပ်နဲ့ အမဲသားစား ညလေးက ၀က်နဲ့ ကြာဇံစားမယ်။ ငရုတ်သီးလဲ တီလိုထည့် အချဉ်လေးပါ ညှစ်ပေးနော် ဂွတ်ဒ်။
သရက်သီးဖျော်ရည်လဲ လုသောက်သွားတယ်။ မက်မုန်သီးလဲ မြည်းသွားပါကြောင်း နော်။
အကင်တွေလဲ စားသွားတယ်နော်၊ အမဲသားမပါတော့ ကောင်းမှကောင်း ရှောင်စရာ မလိုဘူးနော်။
ကန်စွန်းဥလဲ အသေကြိုက်ပေါ့နော်၊ အဲ့လို ပဲနီရယ် ကျောက်ကျော၊ ဒီ့ပြင် ဟိုဟာ ဒီဟာ ဆက်ထည့်ရင် မလေးမှာ ABC ခေါ်တယ်နော်၊ သောက်ကောင်းတယ်။
တီ့ရဲ့ တစ်နေ့တာက ညလေးရဲ့ တစ်နေ့တာဆို ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲနော်....
သက်ပိုင်သူ April 27, 2009 at 7:11 PM
ဟွန်း... ယောင်ပီးတော့ သူ့ဘလော့ကို ရောက်သွားတာ
နေ့လည်စာ မစားခင်.... ဗိုက်တော်တော် ဆာသွားတယ်
အခုမှ ပဲ .. အရီးတားက အရီးတောင်းမှန်း သိတော့တယ်
အမြဲစိမ်း Ever Green လို့ရေးထားတာ
mgnge April 27, 2009 at 8:02 PM
သူ ပဲစားနေတယ် အခုထိ တောင်းထားတဲ့ ဝက်မျှစ် ကျတော့ မချက်ကျွေး
Phyo Maw April 27, 2009 at 10:31 PM
ယပလက်သူများ အသားကတော့ ညိုမြ လို့ပဲခေါ်ရမယ်။
ပုံထဲမှာကလည်း ကျော ပဲမြင်ရတယ်။
နည်းလမ်းက ၅ ခုကြီးတောင် ရှိတာကိုး။ ရေးတာတွေ ဟုတ်ပေမယ့် ရေးတဲ့ ပုံကြီးကြောင့် ဖတ်ရတာ မသက်သာ။ ဖြူဖြူကျော်သိမ်းကို နောက်ထားတဲ့ အင်တာဗျူးတုန်းကလည်း ဒီလိုမျိုးပုံ ဖတ်ရဖူးတယ်။ ရိုးရိုးရေးပါ လို့ အားပေးပါတယ်။
ကွန်မန့်ရေးရင် ရန်များလွန်းလို့ တို့များတော့ စိတ်လျော့ပြီး သက်သက်သာသာ ပြောင်းရေးပါတယ်။ (မဆိုင်တာ ပြောတယ် ထင်ဦးမလားမသိဘူး ရေးသာရေးရတယ် စိတ်ကမဖြောင့်)
ပီအမ် (ညပိုင်း) ကို ဘာဆိုလိုမှန်း မသိပါ။ ဘယ်သူမှ ၀င်မမေးတော့ ကိုယ့်ဘာသာပဲ မေးရတယ်။ အဖြစ်က ဆိုးထှာ။
အရီးတောင်းက မ rita ကို ပြောမှန်း သူကိုယ်တိုင် ရေးတဲ့ မန့် မြင်မှ သိတော့တယ်။
အန်တီချမ်း April 27, 2009 at 10:59 PM
am and pm လေ
ကောင်းကင်ပြာ April 28, 2009 at 3:22 AM
ညနက်ကြီးမှ ပဲ လာဖတ် လာစားတယ် တီရေ၊
sweetpeony April 28, 2009 at 9:33 AM
sweetpeony April 28, 2009 at 10:37 AM
အဲ ၀က်ဆီကို စားချင်ဝူးးးးးးး
wai April 28, 2009 at 11:50 AM
I do like Jut tu jut Market very much. I usually turn around every section again and again. I think one day is not enough to see all shops. Now, i prefer JJ Mall becaus of air con. If you go to Jut Tu Jut in the afternoon, oh my god, sooooooooooooo hot.
By the way, I will be back to MM on 7. Why would you go back to Ygn early?
မေ့သမီး April 28, 2009 at 12:36 PM
စားစားတီရေ။ တီပဲစားနေ။ ဟွန့်။ သူများမှာတော့ စာမေးပွဲရှိလို့ ချက်လည်းမစားနိုင် အပြင်ကိုလည်းအဝေးမသွားနိုင်။ အနားကဆိုင်မှာပဲစားနေရတာ လူလည်းပုစွန်ရုပ်ပေါက်တော့မယ်။
Mae April 28, 2009 at 10:55 PM
သူများ သရေကျအောင်လို့.. :(
အန်တီချမ်း April 29, 2009 at 11:18 PM
29 Apr 09, 21:48
littlebrook: မန့်မရလို့ စီဘောက်မှာရေးသွားတာ ဆောရီးတီရေ
29 Apr 09, 21:47
littlebrook: သင်ယူရမယ့် အနုပညာတဲ့ ... ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုမြင်တယ် ကလေးလေးတစ်ယောက် ဘယ်လိုကြီးပြင်းလာသလဲနော်